Toga Ijipt | Akụkọ Njem
Egypt bụ obodo akara akara tupu na mgbe usoro ọmụmụ nke onye njem ọ bụla. Njem ị gafere site na Egypt ga-enye gị ohere ịmara otu n'ime mmepeanya kacha ochie na nke kachasị mkpa n'akụkọ ihe mere eme. Mba nke nwere ọdịiche dị iche, nke na-adọrọ onye ọ bụla chọrọ ịbanye n'ime ụwa nke ndị Fero na Osimiri Naịl akụkọ akụkọ zuru ezu.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ njem gaa Ijipt, ị gaghị echefu ọkwa a. N'ebe a, anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma iji gaa na mba North Africa a.
1 Kedu oge kachasị mma maka njem gaa Egypt?
2 Njem ịga njem na Egypt dị mma?
3 Kedu ka esi enweta Egypt?
4 Kedu ihe ndị a chọrọ iji banye n'Ijipt?
5 Ntanetị na njem site na Egypt
6 Insurance mkpuchi na ọgwụ mgbochi
Kedu oge kachasị mma maka njem gaa Egypt?
Mgbe ị na-eme atụmatụ njem gaa Ijipt, oge kachasị mma iji gaa bụ site na Machị ruo Mee na site na Septemba ruo Nọvemba. N'ụzọ dị otú a, ị ga-ezere ọnwa kacha sie ike ma dịkarịsịrị oyi n'ihi na agbanyeghị ihu igwe dị ọkụ ma na-ekpo ọkụ oge niile n'afọ, n'ọnwa Julaị na Ọgọstụ ndị temometa ruru ihe karịrị 40ºC.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị nwere ike ịhazi oge ezumike gị, ọ kachasị mma itinye nleta gị niile na oge mbụ nke ụbọchị mgbe okpomọkụ anaghị eto oke. Ozi ọma ahụ bụ na bọs ndị na-eme ndị njem gaa n’ebe ncheta dị iche iche nwere ntụoyi ma na-aga eleta ụlọ nsọ anaghị adịkarị ogologo.
Maka ndị chọrọ itinye mpaghara Oké Osimiri Uhie na njem ha na Egypt iji nọrọ ụbọchị ole na ole zuru ike n'ụsọ osimiri ma ọ bụ nsị, oge kachasị mma bụ site na Mee ruo Septemba.
Njem ịga njem na Egypt dị mma?
Mgbe ị gwuchara ihe bụ oge kacha mma iji gaa mba ahụ, ajụjụ ọzọ ị nwere ike ịgbaso bụ etu Egypt si dị mma taa. Eziokwu bụ na ọnọdụ dị ugbu a na mba ahụ kwụsiri ike mgbe afọ ole na ole nọ na ọgba aghara nke iyi ọha egwu na enweghị nchebe kpatara site na Arab Spring belata ọnụ ọgụgụ ndị njem nleta.
Njem nleta bụ otu n'ime isi mmalite ego na mba ahụ, yabụ gọọmentị ekenyela ọtụtụ ihe iji kwado nchekwa nke ndị njem na ebe ndị njem nleta na họtel. Njem njem na njem gaa ebe dịpụrụ adịpụ na-akụda mmụọ. Ebe nchekwa kachasị dị ukwuu na ebe ndị njem nleta dịka Cairo, Alexandria, Luxor, Aswan na ụsọ oké osimiri Africa nke Oké Osimiri Uhie. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịgbaso ụzọ okporo ụzọ ndị ụlọ ọrụ na gọọmentị setịpụrụ iji na-eme njem mgbe niile n'udo.
N'ihe banyere nchekwa, ọ dị mkpa idebe omenala na iwu mpaghara iji zere ihe ndị na-adịghị mma, ọkachasị mgbe onye njem si mba nwere omenala dị iche iche. Womenmụ nwanyị na-eme njem naanị ha, na-enweghị ụlọ ọrụ njem ma ọ bụ na mpụga sekit ndị njem, enwere nkụda mmụọ na ịkpọtụrụ ndị bịara abịa. Tụkwasị na nke a, a na-atụ aro iji ejiji eji akọ na-ekpuchi ubu na ụkwụ.
N'aka nke ọzọ, ị consumptionụ mmanya na-aba n'anya kwesịrị ịbụ naanị n'ebe ndị ekwere ka a ree ya na ịme ngosipụta ihu ọha n'ihu ọha nwere ike ịbụ ajọ nkatọ n'etiti ọha mmadụ.
Kedu ka esi enweta Egypt?
Zọ kachasị mfe iji banye n’Ijipt bụ ụgbọ elu. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba niile nwere ụgbọ elu na ebe a. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa ego na tiketi ụgbọ elu, ị nwere ike ịhọrọ ụgbọ elu na-akwụsị.
Kedu ihe ndị a chọrọ iji banye n'Ijipt?
Na mgbakwunye inwe akwụkwọ ikike ngafe nke izizi nke ọnwa isii iji banye Egypt, achọrọ visa nke ga-ewe ụbọchị 6. Enwere ike ịhazi visa a na ọdụ ụgbọ elu nke mbata ma ọ bụ na ntanetị tupu oge eruo. Ndụmọdụ? Na-ebu otu ma ọ bụ karịa akwụkwọ paspọtụ gị na akwụkwọ na nke ọzọ na igwe ojii, ma ọ bụ na akaụntụ email, na Google Drive ma ọ bụ Dropbox.
Ntanetị na njem site na Egypt
Inwe njikọ Internetntanetị n'oge niile dị ezigbo mkpa taa. Ọbụghị naanị ị bulite nkọwa niile nke njem anyị na netwọkụ mmekọrịta mana ị ga-akpọtụrụ ndị ezinụlọ anyị na ndị enyi anyị.
N'ụzọ dị otú a ị nwere ike ịhọrọ n'etiti ọtụtụ nhọrọ: zụta kaadị SIM na ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụ n'ụlọ ahịa telifon dị na Cairo ma ọ bụ zụta kaadị SIM n'otu n'ime ụlọ ọrụ ndị na-ere kaadị akwụ ụgwọ na oku na data n'ịntanetị ịnọ ọtụtụ ụbọchị na mba ọzọ na-enweghị nsogbu gbasara njikọ ahụ.
Insurance mkpuchi na ọgwụ mgbochi
Mgbe ị na-ahazi njem ị ga-aga Ijipt ọ na-atụ aro ka ị were mkpuchi mkpuchi njem. Healthlọ ọrụ ahụike Egypt na-achọkarị ịkwụ ụgwọ tupu oge eruo na ụgwọ maka ọrụ enyere na-adịkarị oke ọnụ. Ebe ọ bụ na ndị nnọchi anya gọọmentị Spain enweghị ike inye nkwa ọ bụla, a na-atụ aro ka ị banye amụma mkpuchi ahụike ahụike njem ma jiri kaadị kredit na-eme njem ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịkwụ ụgwọ ahụike ngwa ngwa.
Banyere ọgwụ mgbochi, ọ dị mfe idobe usoro ịgba ọgwụ mgbochi oge emelitere. N'okwu a, ọ kachasị mma ịme oge na ụlọ ọgwụ mgbochi mba ụwa enyere ikike ka a na-atụ aro ọgwụ mgbochi ndị ọzọ, nke a ghaghị idebanye aha ya n'ụzọ onwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Egypt njem